उनले मंसिरमा हुने महाधिवेशनबाट पार्टीमा सक्षम नेतृत्व आउने पनि बताए।
देउवालाई भोट माग्दै प्रकाशमान सिंह र बिमलेन्द्र निधि (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २८ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा सभापति पदको दोस्रो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ । मंगलबार भएको निर्वाचनमा सभापति पदका कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि मंगलबार अपरान्ह सवा ३ बजेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइरालासँगै प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ […]
सभागृहमा देउवासँगै उभिएर सभापतिका लागि मत माग्दै प्रकाशमान सिंह
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान अहिले भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा सभापति पदका लागि मतदान गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु लाइनमा छन्। सभापति पदका लागि शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला प्रतिस्‍पर्धामा छन्। सभागृहमा प्रधामन्त्री देउवा पुगिसकेका छन्। यस्तै, उनलाई समर्थन जनाएका प्रकाशमान सिंह पनि सभागृह पुगिसकेका छन्। अहिले दुवै…
सभापति निर्वाचनबारे सिंह र निधिबीच टेलिफोन संवाद, के भयो कुराकानी?
काठमाडौंः सभापति चयनका लागि हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनको निर्णायक रहेका कांग्रेस नेताद्वय प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिबीच टेलिफोन संवाद भएको छ। मंगलबार बिहान कुराकानी भएको हो। दुबै नेता सभापति चयनको दोस्रो चरणको प्रक्रियामा निर्णयक छन्। विशेषगरि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई दुईमध्ये कुनै एक समूहको समर्थन आवश्यक छ। अर्का प्रतिस्पर्धी…
बाजागाजासहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगे प्रकाशमान सिंह
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह बाजागाजासहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सिहंले अपरान्ह ३:२० मा सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।प्रकाशमानको प्यानलबाट काँग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले पनि आजै उपसभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । उनीहरु आजै उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए ।
काँग्रेस बैठक सुरु, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंह अनुपस्थित
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा पौने २ बजे सुरु भएको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता प्रकाशमान सिंह अनुपस्थित रहेका छन् । आजको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लेखा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी भएको छ ।साथै १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको अन्तिम बैठक भएकाले सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।आजकै बैठकमा पदाधिकारी र क
म नेचुरल क्यान्डिेट हुँ:-प्रकाशमान सिंह
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेदवार चयन हुने कुरामा विश्वस्त छन्। नेता सिंहले आफू प्रकृतिक उम्मेदवार भएको कारण पार्टीमा सभापति बन्ने पालो आएको बताएका हन्। उनले संस्थापनइतरबाट पार्टी नेतृत्वको साझा उम्मेदवारीका लागि धेरै बैठक बसे पछि आज निर्णयमा पुग्ने बताए। आफू नेतृत्वमा पुगेपछि पार्टीलाई आफूले पाएको अनुभवबाट सुदृढ र संस्थागत गर्ने दावी गरेका छन्।
काठमाडौं कांग्रेसको सभापति पदमा सबुज बानियाँ निर्वाचित
नेपाली कांग्रेस काठमाडौंको सभापति पदमा सबुज बानियाँ निर्वाचित भएका छन् । प्रतिद्वन्द्वी उपेन्द्र कार्कीलाई फराकिलो मतान्तरले हराउँदै बानियाँ सभापति पदमा विजयी भएका छन् । निर्वाचित बानियाँ नेता प्रकाशमान सिंह र गगनकुमार थापा निकट मानिन्छन् । पराजित कार्की सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिमा बानियाँको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ । काठमाडौंको उपसभापति पदमा गोकर्ण केसी र राजकुमार नकर्मी तथा सचिवमा इन्द्रबहादुर थापा र गोविन्द पुडासैनीले जितेका छन् । जिल्ला कार्यसमिति सहसचि...
प्रकाशमान सिंह काँग्रेस संस्थापनइतर समूहको नेता बन्लान् ?
काठमाडौं, २४ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १३औं महाधिवेशन जित्नु अघि संस्थापन इतरका नेता थिए । सुशील कोइरालाको निधनपछि रामचन्द्र पौडेल कार्यवाहक सभापति बने । संस्थापन पक्षका नेता पौडेल नै देखिए । पौडेल १३औं महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित भए । त्यतिबेलाको संस्थापन पक्षका कृष्णप्रसाद सिटौला समेत सभापतिको उम्मेदवार बन्दा पौडेललाई धक्का लागेको थियो । […]
काठमाडौं, २४ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह आक्रामक बन्दै गएका छन् । उनले पौडेल संयोजक रहेको राजनीतिक समन्वय समितिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । आज गणेशमान सिंहको १०७औं जन्मजयन्तीको अवसरमा सिंहले राजनीतिक समन्वय समिति आवश्यक नभएको बताए । समितिको संयोजकमा पौडेल छन् । उनले पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकटता […]
सहमतिमै साझा सभापति उम्मेदवार – प्रकाशमान सिंह
मोरङ – नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहमतिमै सभापति उम्मेदवार चयन लागि छलफल जारी रहेको बताएका छन्। विराटनगरमा जिल्लाका पूर्वसचिव यदु विष्टको आमाको निधनमा समवेदना दिन आएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सिंहले देश सञ्चारसँग सभापतिमा धेरैको आकांक्षा देखिए पनि १४ औं महाधिवेशनले निष्ठावान, सक्षम एकलाई रुचाउने बताए। नेता सिंहसँगै डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला, विमलेन्द्र […]